Kedu ka ị ga-esi mee oyi Volvo Penta 5.7 Gi? – Wikipedikia Encyclopedia?
Oge oyi Volvo Penta 5.7l Gsi Engines
Mkpọpu mmiri - 2 bolts (ọdụ ụgbọ mmiri & starboard). Ha dị n'azụ manifold ma ọ bụ ala etiti?
Ngwongwo Ngwunye Drain - bolts 2 (ọdụ ụgbọ mmiri & starboard).
Wepu mgbapụta mmiri mmiri - wepụ 2 hoses.
Tinye bolts na ụdọ mmiri mmiri azụ azụ.
Wepụ hoses pụọ n'ụlọ okpomọkụ ma jupụta na glycol.
N'otu aka ahụ, ego ole ka Volvo Penta 5.7 na-ewe?
The 5.7 nwere ikike nke 6 quarts.
Ọzọkwa, kedu ka ị na-esi eme ka injin inboard dị? Malite na engine ma na-agba ọsọ na-abaghị uru ruo mgbe mgbochi friza ga-esi na ikuku iyuzucha maka sekọnd 30 ma ọ bụ karịa. Mgbe ịwụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ tọgbọ chakoo, malite na -agba ume carburetor, dị ka ọ dị na sterndrive. Fesa ọtụtụ alụlụụ n'ime mgbe ahụ engine ụkwara ma na-eme mkpesa, ma gbanyụọ ọkụ ahụ mgbe antifreeze kwụsịrị.
25 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Ebee ka emebere injin Volvo Penta?
Kedu ụdị mmanụ Volvo Penta 4.3 na-ewere?
Volvo ọ na-eme injin nke ha?
Ebee ka a na-eme injin Volvo?
Ego ole ka mmanụ ụgbọala Volvo Penta na-ejide?
Kedu ụdị mmanụ ị na-etinye n'ụgbọ mmiri?
Kedu ka esi eme ka ụgbọ mmiri Chaparral oyi?
Ị ga-eme ka oyi na-atụ n'ọdụ ụgbọ mmiri strok 2?
Gịnị ka oyi ụgbọ mmiri na-agụnye?
Kedu otu m ga-esi mee ka ụgbọ mmiri m kpoo ọkụ n'oge oyi?
Kedu ka esi eme ka ụgbọ mmiri sterndrive oyi?
Kedu ihe Volvo IPS pụtara?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị naghị ajụ oyi ụgbọ mmiri gị?
Ekwesịrị m ịwụpụ ọgwụ mgbochi mmiri mgbe ụgbọ mmiri kwụsịrị oyi?
Ị ga-eme ka moto outboard dị strok dị n'oge oyi?
Ịkwesịrị ịfefe ụgbọ elu strok 4?
Ego ole ka ọ na-eri iji megharịa ụgbọ mmiri oyi?
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ntọala nrụpụta maka mmanụ dizel engines na Vara, Sweden; Lingang, China; na Lexington, Tennessee, United States, maka mmanụ ụgbọala niile engines na sterndrives. Volvo Penta na-arụ ọrụ n'ụwa niile ma nwee ndị na-ere ahịa 4,000 na mba 130.
SAE 30 Mmanụ igwe sịntetik (SAE10W-40 Mmanụ sịntetik Engine) Volvo Penta akwụsịla mmanụ dị arọ 30 kwụ ọtọ ma na-atụ aro ugbu a. SAE10W-40 sịntetik. Volvo Penta na-ekwu na ogologo 30 mmanụ arọ na ọhụrụ 10W-40 Multi-ọkwa nwere ike iji ọnụ na-enweghị nsogbu.
Onye nwe gara aga, Ford Motor Company, kwere Volvo na-aga n'ihu imewe injin ha, na ọgbọ ọhụrụ ogologo-isi isii engine ewebata na 2006. VEA engines ka akpọrọ "Drive-E" na ahịa. N'afọ 2017, Volvo Ụgbọ ala kwupụtara na ha agaghị emepụta mmanụ dizel ọzọ engines.
Volvo Isi ụlọ ọrụ ụgbọ ala maka China dị na Shanghai. Ndị isi ụlọ ọrụ mmepụta ụgbọ ala dị na Gothenburg (Sweden), Ghent (Belgium), Chengdu na Daqing (China), ebe. engines na- arụpụtara na Skövde (Sweden) na Zhangjiakou (China) na akụkụ ahụ na Olofström (Sweden).
Nkọwapụta Volvo Penta Outdrive na Water Jet
Mmanụ: Ọnụ ọgụgụ
DPX-R Mmanụ sịntetik, API GL-5, SAE 75W-90 2.0 lita
DPX-A Mmanụ sịntetik, API GL-5, SAE 75W-90 2.6 lita
SX-S Mmanụ sịntetik, API GL-5, SAE 75W-90 2.1 lita
SX-C Mmanụ sịntetik, API GL-5, SAE 75W-90 2.1 lita
If ị rụọ ọrụ gị ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe okpomọkụ, họrọ otu-arọ mmanụ (dịka SAE 30). Ọ bụrụ ị rụọ ọrụ gị ụgbọ mmiri na wider okpomọkụ nso, họrọ multi-viscosity mmanụ (dịka SAE 10W-30). Ha na-akpa àgwà dị ka mkpa mmanụ na oyi na-atụ ihu igwe, na-eme ka ọ dị mfe crank engine.
ANTIFREEZE. Iji belata mmetụta ihu igwe oyi na igwe ụgbọ mmiri gị, mgbochi friza dị mkpa.
MGBE MMIRI. Ka ị na-eji mmiri ọhụrụ na-awụpụ moto gị, mmiri mmiri (dị ka ntị muffs anyị na-eyi n'oge a n'afọ!)
Mmanụ ọhụrụ engine.
Mmanụ ọkụ ọhụrụ.
Ihe nkwụnye mmanụ ụgbọala.
Gbanwee ihe nzacha mmanụ ọkụ nke injin gị yana ihe nkesa mmanụ/mmiri ọ bụla dị na sistemụ. Wụpụ gị ụgbọ mmiri Sistemụ pọmpụ mmiri ọhụrụ (sink, tankị, na isi). Tinye ihe mgbochi friza na sistemu pọmpụ gị. Gbaa mbọ hụ na ewepụrụ mmiri na sistemu agbakwunyere niile (ebe a na-asa mmiri, ebe obibi ndụ, mgbapụta bilge, wdg).
electric ụgbọ mmiri Enwere ike iji kpo oku n'ime ụlọ ka ọkụ ebe obibi ma ọ bụ n'ime engine ngalaba na na- na engine na-ekpo ọkụ na akọrọ. Naanị jide n'aka na ị ga-enweta nke ziri ezi maka ọrụ ahụ, dị ka ndị na-ekpo ọkụ ụlọ na engine ndị na-ekpo ọkụ nke ụlọ (nke a na-akpọkwa ọkụ ọkụ) nwere ihe dị iche iche na njirimara.
Igwe mmiri na-ebugharị Powerboat. | Volvo Penta. Volvo Penta IPS bụ usoro nkwalite zuru oke na nke jikọtara ọnụ - niile site na ọdụ ụgbọ mmiri, site na injin, gaa na ndị na-ebugharị. https://sp1004e38d.guided.lon5.atomz.com/?
Ọ bụrụ na You naghị ajụ oyi ụgbọ gị, Ebe a Kedu ihe na-eme. Mmiri na-agbaze ma gbasaa ma nwee ike imebi ihe ọ bụla ọ tọrọ n'ime ya. Mmiri nwere ike ịbanye n'ime oghere na-enweghị nchebe iji mee nke a. Azu na mmiri na-emebi emebi, nnu na nrụrụ nwere ike imebi akụkụ siri ike na injin.
Enwere usoro abụọ na-ajụ oyi injin jụrụ oyi-mmiri ma ọ bụ akụkụ mmiri nke igwe jụrụ oyi: igbapu mmiri usoro ahụ ma hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ, ma ọ bụ jupụta ya antifreeze oyi (propylene glycol). Na-adọta otu injin ga mara nke ọma ka obere akpa mmiri nwere ike ịgbawa akụkụ dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na gị engine nwere mmanu mmanu mmanu, ị na-eme ọ bụghị mkpa iji wepu mkpuchi igbe ikuku. anọ-strok outboard nwere a plastic ikuku oriri na ị fesa mmanụ na-asọ oyi n'ime. na- ụdị nwere valvụ mmezi dabara ma ọ bụrụ ị nwere a Johnson ma ọ bụ Evinrude n'èzí, 1990 na nke ọhụrụ, nwere valvụ mmezi.
4 ọrịa strok na-eme ọ bụghị mkpa “fogging” n’ihi na ejirila mmanụ crankcase kpuchie akụkụ niile na-akpụ akpụ. N'ezie, na-afụ ụfụ a 4 ọrịa strok na-eme ọbụnadị eruteghị ma ọ bụ nwee mmetụta ọ bụla na 99% nke akụkụ ndị na-akpụ akpụ na a Ọrịa 4.
Oge oyi a 2-Ọpụpụ strok: Mgbanwe mmanụ nke obere nkeji
Mercury na-atụ aro ka a gbanwee lube gearcase ahụ kwa awa 100 ma ọ bụ otu ugboro kwa afọ. Agbanyeghị, I kwesiri ime n'agbanyeghị ogologo oge ọ dị tupu echekwa gị n'èzí, n'ihi na ndị na-emerụ emerụ na mmanụ eji eme ihe nwere ike imebi ime nke ala unit.
The -eri nke Ịkwụ Ụgwọ Inwe Gị Ụgbọ mmiri Winterized
Dị ka e kwuru n'elu, nkezi -eri nke inwe ọkachamara oyi gị ụgbọ mmiri maka gị bụ ihe dịka $300. Nke ahụ price bụ mkpokọta nke a dịgasị iche iche nke ụgwọ, otú anyị kwesịrị anya na ụfọdụ ndị ọzọ kpọmkwem ihe atụ nke oyi ụgbọ mmiri akwụ ụgwọ iji nye nkọwa ziri ezi karị.
akpakanamde, oke ego, ego onwe onye, ndị scooters